Baolina tsy misy vy, Ball Valve, Casting Valves - Shineway
Ny vokatray dia manana takelaka lehibe 3, spheres, valve ball ary casting. Ny baolinay dia baolina poakaty ary baolina mafy. Ny valizy baolina dia valizy baolina flange tsy misy vy. Ny casting dia fizarana casting silica sol.
Manana traikefa amin'ny famokarana sehatra mihoatra ny 20 taona isika. Ny baolinay dia misy baolina mitsingevana, baolina raikitra, baolina lavaka ary baolina mafy. Ny fitaovana dia A105, F304, F316, F304L, F316L, ALLOY STEE ary fitaovana hafa
Ny valves-balintsika dia mampiasa ny filanjantsika sy ny baolina hifehezana ny kalitaon'ny vokatra. Ny valvesin'ny baolintsika dia valves-baln flanged indrindra. Ny tsindry dia 150LB, 300LB, 600LB, JIS 5K, JIS 10 sns.
Ny casting anay dia vita amin'ny fizotran'ny solika silika miaraka amin'ny bika mahafinaritra. Ny vokatra dia amidy tsara any an-trano sy any ivelany, ary azo hamokarana arakaraka ny sary nataon'ny mpanjifa.
Ny orinasanay dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny milina, ary afaka manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Zhejiang Shineway Industry Limited. dia naorina tamin'ny taona 2000. Ny orinasa ankehitriny dia miorina ao amin'ny Longwan Binhai Park (akaikin'ny seranam-piaramanidina), izay mankafy ny lazan'ny "China Valve City", miaraka amin'ny velarany 15,000 metatra toradroa. Ny orinasanay dia manana orinasa telo manokana: orinasa mpiorina baolina, fananganana vy, orinasa fanaovana valizy baolina. Ny orinasa izao dia manana atrikasa fandefasana lafaoro famelana elanelam-potoana, atrikasa fanodinana seho, atrikasa fanodinana valizy ary laboratoara misy karazany. Ny orinasanay dia miasa amin'ny foto-kevitry ny "miorina amin'ny fahamendrehana, ny mpanjifa aloha". Kalitao avo, vidiny ambany, serivisy aorinan'ny varotra lafatra.
Ny orinasa dia manome ny mpampiasa amin'ny vokatra avo lenta sy mahay. Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia ny spheres, castings, valves ball sns.